Ladle Refractories Mpanamboatra & Mpamatsy - China Ladle Refractories Factory
Fanamboarana vy vita amin'ny alalàn'ny fanamboarana ny vy vita amin'ny vy
Ity vokatra ity dia manana fiasa ambony amin'ny desulphurization sy deoxidization. Afaka mampihena ny suifide sy oxysulfide amin'ny vy miempo amin'ny ambaratonga ambany indrindra. Izy io dia manana fiasan'ny insulation ary manintona ny fampidirana tsy metaly. Ny fampiasana an'ity vokatra ity dia mety hanatsara ny kalitao sy ny tombotsoan'ny vokatra vy.
Vatoson'ny vy aluminium magnesium refractory castable
Ny labozia dia ampiasaina amin'ny milina vy ary fananganana enta-mavesatra hitondrana rano vy sy fanariana alohan'ny fatana fandrindrona, lafaoro elektrika na mpanova. Azo esorina ny baoritra satria ny lakan'ny tohatra dia afaka manatsara ny fampiasana an-jaza ary manitatra ny fiainam-panompoana.
Submerged Arc Foaming Agent ho an'ny famerenan'ny lafaoro fandoroana zaza
Ny vokatra RMH-LF dia ampiasaina ho an'ny lafaoro fanadiovana zaza, ny vokatra RMH-DH dia ampiasaina amin'ny lafaoro vita amin'ny vy vita amin'ny vy. Ny fampiasana an'ity vokatra ity dia hiantoka ny fofona arc amin'ny onja mandritra ny fizotry ny fofom-borona manontolo. Izany dia hampihena ny fihenan'ny ratra amin'ny hafanana amin'ny arka ary hampitombo ny fahombiazan'ny hafanana. Ny fiparitahan'ny taratra mivantana avy amin'ny mari-pana avo lenta mankany amin'ny lining dia azo sorohina, ny halavan'ny lining dia haharitra kokoa. Ny tahan'ny Dephosphorization dia ho avo kokoa ary ho fohy kokoa ny fotoana famandrihana.